Bandai Anozivisa Kuburitswa kweTekken yeIOS | IPhone nhau
Kune mimwe mitambo isingatombobuda musitaera uye nanhasi, shanduro nyowani dzinoramba dzichirova pamusika. Street Fighter neMortal Combat muenzaniso wakajeka zvandiri kutaura nezvazvo, asi havazi ivo voga. Kana isu tikataura nezve ngano yekurwa mitambo kubva munhandare dze90s, Tekken yaive zvakare yeakanyanya kukosha uye izvo zvakaita kuti tishandise mari yakawanda.
Bandai, muridzi wekodzero, achangobva kuzivisa kuti mumwedzi iri kuuya ichavhura vhezheni yeIOS uye Android mobile mapuratifomu, 27 makore mushure mekurova musika. Parizvino chikamu chazvino cheTekken chiri muchikamu chechinomwe uye chakarova pamusika makore mashoma apfuura.
Zvinoenderana neshoko rekuti Bandai akaburitsa pawebhusaiti yake, iyo nharembozha yeTekken haizove iyo yakasarudzika vhezheniYakave yakagadzirirwa kunyanya iyi mhando yechigadzirwa. Kana iwe wakambotamba chero yeeshanduro dzemutambo uyu wekurwa, iwe uchanyatso rangarira kuti Tekken inotipa vangangoita zana mavara akasiyana ekurwisa nawo, yega yega inotipa dzakasiyana nzira dzekurwa uye kugona kwakasiyana, kugona kunogona kuwedzerwa seRPG inobatanidzwa. , pamwe nenhamba yekufamba kwakakosha kunowanikwa.
Mutambo unotipa akasiyana mutambo modes, kusanganisira yenyaya modhi umo tichafanirwa kugadzira boka revarwi kuti vabatsire Kazuya Mishima naNina kurwisana neyakaipisisa Revenue. Nezve iyo monetization system iyo inozopihwa nemutambo uyu, iyo kambani haina kuzivisa nezvazvo, asi ichiona kubudirira kuri kuita mahara-kutamba-mitambo variko, zvinonyanya kungangoita kuti musimudziri asarudze iyi bhizinesi modhi ne-in-app. kutenga, chimwe chinhu chisingazosetsa kune vanhu vazhinji, asi ivo havazove nesarudzo kunze kwekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Bandai anozivisa kuburitswa kweTekken yeIOS